Amawebhusayithi Namanje Angumthombo Osebenzayo Wenzuzo Yokwenziwa | Martech Zone
Amawebhusayithi asewumthombo osebenzayo wemali engenayo
NgoLwesine, Septhemba 19, 2013 NgoLwesithathu, uDisemba 17, 2014 ULarry Alton
Ukube ubungakholelwa kukho konke okufundayo, ukuqala iwebhusayithi ukuze uthole imali engenayo kungaba yinto elahlekile kulezi zinsuku. Labo abaqinisekise isitifiketi sokufa basola umncintiswano omkhulu kanye nokubuyekezwa kweGoogle njengezizathu zokuthi kungani imali engenayo yendabuko, ngokuthengisa okuhambisanayo, kungasenawo umthombo osebenzayo wokwenza imali.
Kodwa-ke, akubona bonke abantu okubonakala sengathi bayitholile imemo. Eqinisweni, kusenabantu abaningi kuwebhu abenza ipenny enhle yize behola imali engenayo kusuka kuwebhusayithi yabo.
Ingeniswa Kanjani Imali Yokwengamela kwiWebhu
I-Investopedia ichaza imali engenayo njengaleyo “etholwa ngumuntu ebhizinisini angabambi qhaza kulo.”
Izakhiwo zeWebhu zaba ngumthombo oqinile wemali engenayo kwabaningi abakwazile ukudala amakhasi ambalwa wokuqukethwe angaba sezingeni eliphezulu kuGoogle noma ezinye izinjini zokusesha. Ukuthembela kulokhu, abanikazi besiza bazothuthukisa imikhiqizo njengezinkampani ezihambisanayo; abahola imali ngekhasimende ngalinye abalithumela kusayithi abayinhlangano nabo. Abanikazi bempahla yewebhu, ngezikhathi ezithile, bazobuyekeza abanye sokuqukethwe, wakhe amanye ama-backlinks noma ufinyelele ngokuthunyelwe kwebhulogi lezivakashi kepha ngaphandle kwalokho okulindelwe ukuthi iwebhusayithi izosebenza ngaphandle kokungenelela okuningi futhi ikhiqize inzuzo enempilo.
Kepha izikhathi sezishintshile. Ukubuyekezwa kwe-algorithm yakwaGoogle kwenze ukwakheka kwe-backlink okungeyona engokwemvelo kangangokuba amawebhusayithi amaningi wemali engenayo ahlala esijezisweni kwizinga lokusesha. Izixhumanisi eziningi ezihambisanayo nezikhangiso nazo zidale ukuthi iningi lalezi zingosi lilahlekelwe yindawo yazo phakathi kwemiphumela ephezulu. Ngaphandle kwezinga eliphezulu, imali engenayo evela kulawa masayithi yomile.
Kodwa-ke, ukuthi imodeli eyodwa yemali engenayo ayisakhiphi imiphumela efanayo akusho ukuthi insimu ifile. Eqinisweni, kusenezindlela eziningi lapho amawebhusayithi akhiqiza khona imiphumela emihle ngendlela yemali engenayo.
Ukwenza Amasayithi Ewebhu asebenze ngo-2013
Emuva ku-2012, Iphephabhuku iForbes ligijime ucezu enesihloko esithi, “Izizathu Eziphezulu Ezine Zokuthi Kungani 'Imali Engenayo' Ingumcabango Oyingozi.” Kuyo, bachaze ukuthi ayikho iwebhusayithi engabamba futhi igcine amakhasimende ngokungenzi lutho. Kuhlale kunomsebenzi okufanele wenziwe ukuze uhlale phambili komncintiswano. Yize lokhu kuyiqiniso, umqondo wokuthola imali engenayo usengaba ngumenzi wemali omkhulu - uma iwebhusayithi yakho inikeza ulwazi olufunwa ngabantu, ungazuza. Leyo yingxenye yokwenziwa, kepha umuntu kufanele akumakishe futhi akuvumelanise nalokhu okuqukethwe.
Ngo-1999, utshalomali oludumile uTim Sykes wenza cishe amasheya ezi- $ 2 million zokuhweba ngosuku phakathi kwamakilasi eTulane University. Kulezi zinsuku, uthatha amasu amenzele leyo mali ayiphendule isigaba sokwakha umnotho esilethwe online. Uxhumana nabafundi bakhe, futhi uyamaketha umkhiqizo wakhe kodwa okuqukethwe kwenkambo akuyona into edinga ushintsho olukhulu.
Ukufundisa ikhono eliyigugu, noma okungenani elifunwayo, kungenye yezindlela zokuguqula iwebhusayithi ibe ngumthombo wemali engenayo.
Izincwadi zezindaba zingenye indlela izakhiwo eziningi zewebhu ezikhiqiza ngayo imali. Hhayi ngemali yokubhalisa, kodwa ngokumaketha kokuhambisana.
Ukwakha uhlu olukhulu lwabantu abanentshisekelo kungaguqula inzuzo ehloniphekile. Kepha ukwakha lolu hlu kuqala ngokuthola ukwethenjwa kwezivakashi kwiwebhusayithi. Lapho belinde ngokulangazela imininingwane engaphezulu, amathuba okuthi babhalisele ukuthola i-newsletter aphakeme kakhulu. Iphepha lezindaba, uma linokuqukethwe okubalulekile, lingasetshenziselwa ukuthengisa imikhiqizo ngokumaketha okuhambisanayo.
Thatha CopyBlogger.com, Ngokwesibonelo. Izinkumbi zama-blogger zilandela le sayithi ukuthola imininingwane yokuthi zingawenza kanjani ama-blog abo abe ngcono, futhi yilowo nalowo obhalisa ukuthola ama-imeyili avela kubo njalo wethulwa kokunikezwayo okuzosiza ekwenzeni isiza imali.
Kungashiwo okufanayo ngama-podcast, amabhulogi noma olunye uhlobo lwendlela ye-Intanethi. Uma nje imininingwane inedumela futhi isiza abantu ukuxazulula inkinga, ingahlomulisa izinhlangothi zombili.
Amawebhusayithi asengaba ngumthombo omuhle wemali uma enikeza inani labasebenzisi ngandlela thile. Amasu amadala wokuphonsa ndawonye amakhasi ambalwa acebile amagama ukuqoqa ithrafikhi yokusesha ifile, kepha lokhu akuyona into embi ngokuphelele. Umsindo nokungqubuzana okunikezwa yilezi zinhlobo zamasayithi kususe kuphela kumasayithi anikezela okuthile izivakashi zabo ezingakusebenzisa empeleni.
Isihluthulelo sempumelelo ukuhlinzeka ngokuthile okudingwa ngabantu. Kuzohlala kunemali ezokwenziwa kwi-Intanethi lapho lo mqondo olula wenziwa ngempumelelo.
Tags: okwenza imali onlineukumaketha onlineimali engenayoukumaketha kwewebhu
U-Larry ungumeluleki ozimele webhizinisi onakekela izitayela zezokuxhumana, ezamabhizinisi nezamabhizinisi. Mlandele ku-Twitter naku-LinkedIn.
Sep 19, 2013 ngo-8: 41 PM
Ngicabanga ukuthi uma singena ngemali engenayo ngokusebenzisa iwebhusayithi, lapho-ke kufanele sitshale isikhathi, izinsizakusebenza necebo leforcast ukuze lihlale lifanele. Khiqiza okuqukethwe okuwusizo, wenze imali ngakho wakhe umphakathi. I-Google nezinye izinjini zokusesha zithanda i-buzz nomsebenzi ngaphakathi kwesayithi.
Sep 20, 2013 ku-7: 10 AM
Ngivumelana nawe Larry! Uma ufuna ukuthi ibhizinisi lakho liphumelele, kubalulekile ukuthi ube newebhusayithi eyakhelwe kahle ukuthengisa online.Noma amabhizinisi amancane, endawo adinga iwebhusayithi enhle ukukhulisa ukubonakala nokukhiqiza kwebhizinisi labo.